Rajadee Bay Kuwa Dhintay Leeyihiin? | War Wanaagsan
Rajadee Bay Kuwa Dhintay Leeyihiin?
1. Muxuu yahay warka wanaagsan ee ku saabsan kuwa dhintay?
Ciise saaxiibkiis Laasaros afar maalmood buu meyd ahaa markuu Ciise gaaray Beytaniya tuulo u dhowayd Yeruusaalem. Ciise iyo kii dhintay walaalihiis Maarta iyo Maryan waxay wada tageen xabaashiisii. In yar kaddib dad badan baa soo ururay. Ma maleyn kartaa farxadday dareemeen Maarta iyo Maryan markuu Ciise Laasaros dib u soo nooleeyay?—Akhri Yooxanaa 11:21-24, 38-44.
Maarta way ogeed warka wanaagsan oo ku saabsan kuwa dhinta. Waxay garanaysay inuu Yehowah sarakicin doono kuwa dhintay siday dhulka dib ugu noolaadaan.—Akhri Ayuub 14:14, 15.
2. Maxaa nagu dhici doono markaan dhimanno?
Ilaahay Aadan wuxuu ku yiri: “Ciid baad tahay, ciid baadna ku noqon doontaa.”—BILOWGII 3:19.
Dhoobo baa binuʼaadanka laga sameeyay. (Bilowgii 2:7; 3:19) Markuu jidhkeennu dhinto waxba naga ma sii noolaado. Ma nihin naf ku dhex nool jidh. Markaynu dhimanno maskaxdeennuna way dhimataa oo fekradaheenna way baabbaʼaan. Sidaas daraaddeed buu Laasaros waxba uga sheegi waayay wixii ku dhacay markuu dhintay waayo kuwa dhintay waxba ma oga.—Akhri Sabuurradii 146:4; Wacdiyahii 9:5, 6, 10.
Ilaahay dadka miyuu dab ku cadaabaa markay dhintaan? Naarta waa tacliin been ah oo Ilaahay bay been ka sheegtaa. Waayo Kitaabka Quduuska ah wuxuu ina baraa inay kuwii dhintay waxba ogayn. Ilaahay marnaba ka ma fekerin inuu dad dab ku cadaabo taasi waa wax uu aad u karho.—Akhri Yeremyaah 7:31.
Daawo fiidiyowga Maxaa Nagu Dhici Doono Markaan Dhimanno?
3. Kuwa dhintay may inala hadli karaan?
Kuwa dhintay mana hadlaan mana maqlaan. (Sabuurradii 115:17) Laakiinse malaaʼigaha qaarkood baa sharfalayaal ah. Oo waxayna la hadli karaan dadka iyagoo iska dhigaya qofkii dhintay. (Yuudas 6) Yehowah wuxuu inaga mamnuucay inaan isku dayno la hadalka kuwii dhintay.—Akhri Sharciga Kunoqoshadiisa 18:10, 11.
4. Ayaa la soo nooleyn doonaa?
Malaayiin badan baa dhulka loogu soo celin doonaa inay dib u noolaadaan. Xitaa kuwii Ilaahay aqoonin oo sharka fali jiray baa la soo sarakicin doonaa.—Akhri Sabuurradii 37:29; Falimaha Rasuullada 24:15.
Kuwa la soo sarakiciyo runta Ilaahay ku saabsan bay baran doonaan waxayna muujin doonaan inay iimaan qabaan markay Ciise addeecaan. (Muujintii 20:11-13) Kuwa dhulka loogu soo sarakiciyo oo waxa wanaagsan sameeya waxay ku raaxaysan doonaan nolol weligeed ah.—Akhri Yooxanaa 5:28, 29.
5. Sarakicidda kuwa dhintay maxay Yehowah ka muujisaa?
Ilaahay markuu Ciise soo diray inuu innaga inoo dhinto rajo buu u suuraggeliyay inay kuwii dhintay mar kale noolaadaan. Sidaa daraaddeed sarakicidda dadka dhintay waxay inoo muujisaa jacaylka Yehowah iyo nimcadiisa. Markay kuwa dhintay soo sarakacaan ayaad jeclaan lahayd inaad si gaar ah u aragtid?—Akhri Yooxanaa 3:16; Rooma 6:23.
Wadaag Wadaag Rajadee Bay Kuwa Dhintay Leeyihiin?